Iprofayile yenkampani-u-Hebei Mujiang wokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kurhwebo lwangaphandle.
Hebei Mujiang Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd., Yasekwa ngo-2019, ibekwe egumbini 2003, No.8 Ruicheng isakhiwo ofisi ngamazwe, District Chang'an, Shijiazhuang komzi. Ubungakanani bayo beshishini bugubungela ukuzenzela inkonzo kunye nokungenisa ngaphakathi kunye nokuthumela ngaphandle kwempahla yasekhaya eyenziwe ngokwezifiso, iingcango ezenziwe ngomthi, iingcango zealuminium kunye neefestile, izixhobo zekhompyutha, ucingo locingo kunye neebhokisi zeglasi, kunye nomthamo wokungenisa nokuthumela ngaphandle wezigidi ezi-5 zeedola zaseMelika.
Ikakhulu zithunyelwa eYurophu nase-United States kunye namanye amazwe, iye yasekwa elungileyo ixesha elide ishishini kunye noqhakamshelwano abafowunelwa kunye mpuma Asia, iYurophu kunye namanye amazwe, uye waqonda uqoqosho isikali kumazwe kunye nemarike, uthungelwano intengiso kunye nemveliso isiseko, exhasa ngamandla ushishino oluthumela impahla kumazwe angaphandle kunye nophuhliso loqoqosho olujolise kumazwe angaphandle kweli phondo lethu.
Umgangatho wokuqala, umthengi uphezulu, inkonzo yenqanaba lokuqala.
Sineqela lethu elikhethekileyo lokubonelela ngenkonzo ebalaseleyo, Amalungu eqela lethu aqukethe iitalente ezahlukeneyo. Sinokubonelela ngazo zonke iintlobo zononophelo kubathengi ngeelwimi ezahlukeneyo. Ukongeza, sinabasebenzi abaqeqeshiweyo emva kokuthengisa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso, sinokunxibelelana kunye ngaphandle kwemiqobo nangaliphi na ixesha, ukusombulula iingxaki zakho ezahlukeneyo.
Kwimveliso nganye esiyithengisayo, sinolawulo olungqongqo lomgangatho, siya kuba nabasebenzi abakhethekileyo bokubeka iliso kwinkqubo yemveliso kunye nenkqubo yokulayisha ukuze kuqinisekiswe ukuba iimveliso zethu zingafikelela kwizandla zakho zikhuselekile kwaye siza kuphinda siqinisekise umgangatho weemveliso ngaphambi kokuziswa. Ukuqinisekisa ukuba akukho zingxaki phambi kokuba impahla ishiye umzi-mveliso.